Ọkachamara BANNER POLE
Kemgbe afọ 2005
Weihai Wisezone Outdoor Equipment Co., Ltd. (Weihai Wisezone Display Equipment Co., Ltd.) bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe nwere ahụmahụ 16 afọ, ọkachamara na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-ahụ anya maka ọkọlọtọ ọkọlọtọ / ọkọlọtọ ọkọlọtọ & ngwa ngosi ihe ngosi.
Onye ọsụ ụzọ
Ịbụ onye ndu na ụlọ ọrụ ọkọlọtọ ọkọlọtọ site na ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ.
Iji mepụta ụkpụrụ ngwaahịa maka ndị ahịa ma nyere ndị ọrụ aka imezu ntozu onwe ha.
Iji nwee ọganiihu na uto na ndị ahịa, ndị ọrụ na ndị na-ebubata ya.
Weihai Wisezone bụ ụlọ ọrụ mbụ na China nke na-eji carbon composite ihe na-eme ka ọkọlọtọ ọkọlọtọ na-efe efe kemgbe 2005. Ọ bụghị onye mbụ na-emepụta ọkọlọtọ na-efe efe n'ụwa, ma anyị mere ka ọ dịkwuo mma karịa nke mbụ ma mepụta ụlọ ọrụ nke ọkọlọtọ carbon composite banner. okporo osisi maka China ma bụrụ otu n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emepụta ọkọlọtọ ọkọlọtọ maka carbon composite / fiberglass ọkọlọtọ.
Site n'ọchịchọ anyị maka imepụta ihe ọhụrụ, ndị otu R&D anyị na-anọgide na-emepụta ngwaahịa ọhụrụ kwa afọ. Anyị nwere ihe karịrị 10 patented ihe dị ka multi-arụ ọrụ mmiri tank, 4in1 ọkọlọtọ ọkọlọtọ usoro, bụ ndị na-ewu ewu n'ụwa nile ihe na-esochi ndị ọzọ.
Anyị na-elekọtakwa arịrịọ onye ọ bụla ma chepụta ngwaahịa OEM / ODM naanị maka gị.
Anyị na-arụ ọrụ mgbe niile na-emeziwanye mmepụta anyị site na njikwa dabere, nke nwere ike ikwe ka mmepụta anyị bụrụ nnukwu mgbanwe na obere oge, mgbe 12000pcs okporo osisi na 12 ụbọchị.
Ọdịmma, ịdị arọ dị arọ na ike dị elu bụ njirimara nke okporo osisi ọkọlọtọ anyị mejupụtara carbon. Akwụkwọ ikike afọ 3 maka mkpanaka ọkọlọtọ anyị niile, nke egosipụtara na ọ ga-adị ndụ n'okpuru ule ọsọ ikuku 160km / h na ụlọ nyocha ọwara ikuku nke Italy.
Ebe wzrods guzo, ebe ịtụnanya na-eme!